EyeKhala 19, 2018 admin
imali Blockchain ukubetha phantse $ 12B ngu 2022
Ingxelo entsha epapashwe International Data Corporation ulindele inkcitho izisombululo blockchain ukwandisa ngonyaka kwi izinga lokukhula phantse 75% yi 2022. onesihloko i “Worldwide Semiannual Blockchain Spending Guide” umhlaziyi le nkampani ukuba inkcitho epheleleyo kwiiprojekthi kushishino blockchain ukuba ukubetha $11.7 billion ngo 2022 kuphela, xa kuthelekiswa $1.5 billion kulindeleke ukuba isetyenziswe ngendlela 2018.
Ingxelo phambili wongezelela ukuba “software platform blockchain iya kuba udidi likhulu ngokuchitha ngaphandle iinkonzo udidi kunye nenye kwezi ndidi ezanda jikelele, kunye software yokhuseleko.” Le ngxelo ichaza ukuba data ibonisa inani $552 yezigidi eyachithwa kwiincwadi blockchain licandelo zemali yedwa 2018. Ulwabiwo kunye neenkonzo kwicandelo Enye ingxelo $334 million.
trueDigital uqala market-umenzi-based index price Bitcoin
trueDigital Holdings, umakhi phambili kwezisombululo yamaziko-grade yorhwebo asethi digital, usebenzisana 10 Ababoneleli amatyala kuquka Genesis Global Trading, XBTO Group, Circle, DV Chain, Hehmeyer kunye Altonomy ukudala uMenzi kwimarike lokuqala esekelwe index Bitcoin amaxabiso efuna ukubeka umgangatho entsha kwimarike asethi digital ebonisa kukomelela kunye elubala iimfesi exchange-based Bitcoin zisasilela intengiso.
Michael Moro of Genesis Global Trading uthe “Imarike asethi lwedijithali uselula, ingakumbi ukuba amaziko ezemali, trueDigital ke azimiseleyo ekwakheni amacandelo afunekayo ukuba bathungelane le yendalo kwaye wenze kwelimiweyo yemizimveliso abafuna utyhileko asethi digital. IOTC indices ke inyathelo elilandelayo phambili ekukhuleni imarike.” Senziwe ngo March 2018, TDH uceba okuqalisa elawulwayo, ahlobene lweshishini yokurhweba asethi digital.
bonke “Big Four” abaphicothi platform blockchain ecaleni ingxelo zemali
I hlabathi 4 enkulu yabarhwebi - Deloitte, ey, KPMG yaye PwC - bazihlanganisa iqela 20 iibhanki e Taiwan kwetyala inkonzo blockchain kwiinkampani zoluntu zophicotho’ iingxelo zemali zethutyana. Ngokweendaba zendawo, iqonga entsha ihambisa mveliso zoluntu’ Iinkcukacha zentengiselwano kwi blockchain, apho iibhanki inxaxheba validators.
Oku kuvumela yabarhwebi ukujonga imicimbi engekenziwa kwi kwitsheyini lula siphazamise-proof of data ngendlela asasaza, zokulungelelanisa automating inkqubo yokuqinisekisa. Co Information Service Financial Taiwan kaThixo. ulindele iteknoloji entsha ukunciphisa ixesha isiqinisekiso “isiqingatha ngenyanga” ukuba “phakathi kosuku.” Emva kwetyala, le nkampani ulindele ukuqalisa inkonzo uphicotho ukuya 1,400 iinkampani noluntu ezidweliswe kwi siqithi kunyaka olandelayo.
South Korea Izicwangciso kwimboni yerhafu zokuqala blockchain
Urhulumente woMzantsi Korean ubhengeze isicwangciso ukuba kuhlaziywe imithetho yerhafu yangoku lokwandisa iingenelo kwiinkampani egxininisa kuphuhliso lobuchwepheshe lutsha, kubandakanya blockchain, njengenxalenye push belizwe yokukhula ezintsha. irhafu ukuba kuncitshiswa iinkampani ajongene uluhlu 157 “zobuchwepheshe-ukukhula entsha” ngo 11 iindawo.
Urhulumente uthe iinkcukacha ngakumbi isindululo uya kubhengezwa ngoJulayi 26, kunye neenguqu kulindeleke ukuba ukuthatha isiphumo yi kwikota yokuqala ka 2019. In iindaba ezininzi ezizalanayo, Ministry South Korea ngayo Science and ICT kutshanje ubhengeze ukuba uceba ukutyala imali $9 million ekupheleni kuka 2019 ukuxhasa iinkqubo blockchain pilot kwiindawo ezintandathu kwinkonzo karhulumente.
Izabelo Square hit-ixesha lonke-ophezulu iindaba kwabasebenzisi NY ukuba kuthengiswa Bitcoin ngo-app
Izabelo of Square Inc. ivaliwe ephezulu entsha emva kokuba le nkampani ithe wamkela mvume efanelekileyo ukuvumela Bitcoin ukuthengisela app yayo Imali eNew York. Le nkampani wanikwa iphepha-mvume currency virtual yi New York State ngoMvulo.
ngaphambili, abasebenzisi Cash app eNew York akwazi ukuthenga nokuthengisa Bitcoin. urhwebo Bitcoin ngoku iyafumaneka kwi-app Imali 48 lithi, eshiya Georgia nje kunye eHawaii nje kuphela ezimbini musa ukuvumela Bitcoin urhwebo kwi app. Izabelo Square aphindwe 178% kule minyaka 12 iinyanga, ngoxa S&P 500 iye yazuza 14%.
Bitcoin Investment Trust wongeza ~ $ 10m utyalo-mali ezintsha veki yonke
umbala womfanekiso obuNgwevu Investments, umniki-mali le emva Bitcoin Investment Trust, wathi kokuba lokubonisa phantse $10 million kutyalo-mali olutsha veki yonke, kwaye uninzi loo eyinkunzi iyeza bezimali beziko. Ingabinani New York-based, ephethwe yi-Digital Currency Group, wenza isaziso Digital Asset Investment iNgxelo yayo asandula wakhululwa, inikwe ukusebenza kwinkampani yotyalo mali kwithuba kwisiqingatha sokuqala sika 2018.
abatyali-Institutional zimele ~ 50% ye-mali iyonke (~ $ 250M) zibe ziimveliso umbala womfanekiso obuNgwevu. Abarhwebi abazizityebi ngemiyinge emincinci kunye nemali yomhlala phantsi ngamnye phezulu 20% ngasinye kanye. Ukongeza BTC Investment Trust, ezinye iimveliso fund umbala womfanekiso obuNgwevu ziquka i Digital Fund Cap ezinkulu, le nkampani ukuba imveliso index yokuqala, kunye ingxowa-mali ngamnye Litecoin.
Cardano Moon Shot To $5.00 ngo ...
Post Previous:Blockchain News 18.07.2018
Post Next:Blockchain News 20.07.2018
Altcoin News – umthambo & Microsoft, Ubiq wins award, TenX & Ripple XRP on Huobi Pro
SEC Delays Bitcoin ETF Until December – Namhlanje Crypto News
BULL RUN Coming!? Bitcoin ETF Could Change Everything – Namhlanje Crypto News
EyoKwindla 24, 2019